mt4 - JP Markets
Kungani i-MT4 yethu ingcono?
AmaMakethe aseJP ahlinzekela ukunikezwa kwesiteji se-MT4 ngokukhishwa kwekhwalithi yokukhishwa engqondweni. Ukuhweba nge-MT4 engenakho Okudingekayo, Azikho Ukulahlwa okuhambisana nokuguquguquka okuvela ku-1: 1 kuya ku-500: 1.
I-platform ye-MetaTrader 4 iyinhlangano yegolide yanamuhla kumapulatifomu amasha nokuhweba anamandla. Iyakwazi ukucubungula izinsimbi ezahlukene zezimali futhi isetshenzisiwe ngabathengi bezokuthengisa ukuthenga nokuthengisa izimali.
Ngaphandle kokuvumela abasebenzisi ukuthi bahwebe ku-Forex, isiteji se-MT4 sisekela ikusasa, ama-indices, ama-equities kanye nezinye izinto ze-CFD.
I-platform ye-MetaTrader4 iphelele kubahwebi bazo zonke amazinga okuhlangenwe nakho futhi iyabonakala ngenxa yesikhombikubona sayo somsebenzisi-friendly, izici ze-charting ezithuthukisiwe, amathuluzi okuhlaziya ezobuchwepheshe kanye namakhono okuhweba okuzenzakalelayo. I-platform yethu ye-MetaTrader 4 isekela ama-akhawunti amaningi e-akhawunti ehlanganisa i-USD, EUR, GBP, SGD ne-PLN itholakala ngezilimi ezingaphezu kuka-30 ezahlukene.
Izakhiwo zayo ezisakazwayo, uhlelo lokuphepha oluqinile kanye nokuhweba okuhambayo okuhamba phambili kwamanye amakhono abalulekile anikezela i-MetaTrader 4 izinzuzo zokuncintisana eziphoqelela, enikeza isisombululo esiphelele kwezidingo zokuhweba ezidinga kakhulu.